गरीबसँग कार्य गर्दै - चर्च अभ्यास गरीबी उन्मूलन - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक मार्च 2, 2021 मार्च 1, 2021 मिगुएल टोरनेर ब्लग, सम्पादकको पिक, ग्लोबल विश्व, धर्म
गरीबी भनेको परमेश्वरसँगको सम्बन्धको अभाव हो, आफैं, अरूहरू र बाँकी सारा सृष्टि।
भगवान्को सृष्टिको समग्रताले समग्र विकास र समुदायमा कामको माग गर्दछ।
चर्च र मेलमिलापका राजदूतहरूले समग्र समुदायको विकासलाई कार्यमा लान खोजेका छन्।
चेलाहरूको अन्तिम लक्ष्य परमेश्वर, आफैं, अरूहरू र बाँकी सारा सृष्टिसँग मेलमिलाप खोज्नु हो।
गरीबीको समस्या व्याप्त छ र पूर्ण छ। गरीबी भनेको भौतिक आवश्यकताहरूको अभाव मात्र हो र ती आवश्यकताहरू पूरा गर्न पैसाको अभाव हो। विश्वास र आत्माको कमी भनेको गरिबीको सबैभन्दा उपेक्षित रूप हो जुन धेरैले महसुस गर्न सक्दैनन्। गरिबीमा बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको दुबै आध्यात्मिक र भावनात्मक आवश्यकताहरू छन् जसलाई उचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। गरिबी निवारण गर्न उत्तम तरिका चर्चले येशू र सुसमाचारको सन्देश फैलाउनु हो किनकि उसले पक्कै पनि व्यावहारिक र भावनात्मक दुवै आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ।
सम्पूर्ण समुदायको विकासको अभ्यास गर्ने चर्च
मानिसजातिलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सुअवसर येशूको कार्यवाहकको रूपमा छानिएको थियो। यद्यपि हामी साक्षी दिन्छौं र मानवजातिको लागि सबैभन्दा ठूलो सुअवसर स्वीकार गर्दछौं, प्रायजसो विश्वासीहरू यस सम्बन्धमा त्यस्तो जोडदार महसुस गर्दैनन्। सन्देश र शुभ समाचारको ग्लोबलाइज गर्न येशूले आफ्ना अनुयायीहरू र विश्वासीहरूलाई छान्नुभयो। येशूको सन्देशको मूल बिषय परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार र खुशीको खबर पठाउनु र फैलाउनु थियो। विश्वास गर्नेहरूका लागि सुसमाचार घोषणा गर्दा येशू आफ्ना चेलाहरू र अनुयायीहरूलाई उहाँको शिक्षाले सुसज्जित पार्नुहुन्छ। येशूको आज्ञाअनुरूप चेलाहरू सुसमाचारको प्रचार गर्न अघि बढे। वर्षौंसम्म तिनीहरू येशू ख्रीष्टले सुसमाचारको प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको पवित्र कार्य एकलैका साथ पूरा गरिरहेको देखेका थिए। अब, उनले तिनीहरूलाई सुसज्जित पारे र बाहिर जाने र परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्न बोलाए।
“तब उहाँले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई बिमारीहरूलाई निको पार्ने र भूतहरूलाई भगाउने शक्ति र अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा घोषणा गर्नु बिमारीहरू र रोग निको पार्न बाहिर पठाउनु भयो। ” ल्यूक 9: 1-2
मानवजातिलाई छुटकारा दिन स्वर्गबाट ​​तल ल्याइएको सुसमाचार सुसमाचार हो र सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको प्रतिज्ञा गरिएको लाभ र इनामको रूपमा राम्रो काम ठानिन्थ्यो। धेरै मानिसहरूले तर्क गर्दछन् कि सुसमाचारका पुस्तकले मानव दु: खको लागि कुनै ठोस समाधान छैन - येशूको सन्देशले सांसारिक समस्याहरूको समाधान प्रकट गर्दछ। यद्यपि, येशू र हाम्रो पुनरुत्थानको लागि येशू के गर्नुभयो भन्ने कुरामा विश्वासका मानिसहरू विश्वस्त छन्, तर तिनीहरूमध्ये धेरैजसो सुसमाचारको पुस्तकले प्रचार गर्ने कुरामा विश्वास गर्न असफल हुन्छन्।
येशूले विश्वासीहरू र अविश्वासीहरूलाई सबैलाई पठाउनुभयो। शुभ समाचारको शाब्दिक अर्थ राम्रो समाचार हो। येशू सँधै परमेश्वरको राज्यका मानिसहरूका लागि सावधानीपूर्वक र आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमाथिको हाम्रो विश्वास हराउँदै जाँदासमेत उसले आफ्ना विश्वासीहरूलाई नदेखीएको तरिकाबाट बचाउँछ। मानवताको एकमात्र उद्धारकर्ता हुनुको मुख्य कारण सुसमाचारको विश्वासलाई बलियो बनाउनु थियो र हामीलाई दैनिक जीवनमा परमेश्वरको सन्देशको अभ्यास गर्न सक्षम गर्नु थियो।
यहाँ बुझ्नको लागि विचार यो हो कि सुसमाचारको हामीहरु सबैको बारेमा कुरा गर्छ। येशूले प्रचार गर्नुभयो कि पिता सबै भन्दा महान हुनुहुन्छ, तर उहाँ र परमेश्वर एक हुनुहुन्थ्यो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मालाई पिता र पुत्रबाट अलग गर्न सकिदैन, र त्यस्तै गरी, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक अर्काबाट अलग गर्न मिल्दैन। येशूको सन्देश, जो त्रिएकमाथिको विश्वास हो, एक अन्तर्निहित र अविभाज्य विश्वास हो, व्यक्तिगत रूपमा भागहरू भन्दा ठूलो। त्रिएकको अन्तर्क्रियाले येशू र ईश्वरलाई पवित्र बनाउँदछ।
मानवजाति परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको हो। उहाँले हामीलाई सिद्धता, निर्दोष र पूर्णको साथ डिजाइन गर्नुभयो। जसरी असल प्रभु र येशू पवित्र हुनुहुन्छ, मानवता पनि ईश्वरको साथ थियो। ठूला वा साना, पृथ्वीमा सबै सृष्टिहरू त्रिएकबाट समग्रताको निश्चित ढाँचा लिन्छन्। सरल बनाउनको लागि, बाइबलीय होलिजम भनेको होलोनिक ईश्वरको बारेमा हो जुन होलोनिक सृष्टिद्वारा मानिसहरुलाई बचाईरहेको छ र यसलाई समग्र राख्दै हो।
भगवान्को सृष्टिको समग्रताले समग्र विकास र समावेशी समुदायको माग गर्दछ। सामुदायिक विकास भौतिक गरीबीको लागि स्थान-आधारित, समाधान-केन्द्रित प्रतिक्रियाको संलग्नतासँग सम्बन्धित छ। यो असमानता न्यूनीकरणको बारेमा हो, केवल प्रभाव उन्मूलन मात्र होइन। सामुदायिक विकास दृष्टिकोणले प्रणाली, कारक, र वातावरणमा रहेको फाटोहरूलाई पूरा गर्दछ जसले गरिबी सिर्जना र बढ्दो नेतृत्वमा पुर्‍यायो।
जब यो समग्र समुदायको विकासको कुरा आउँछ, भौतिक गरीबी हटाउन पर्याप्त छैन। समग्र समुदायको विकासमा चर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। समग्र समुदाय विकासको अभ्यासले बिग्रेको चार मुख्य सम्बन्धहरूलाई पुन: स्थापना गर्नु आवश्यक छ, जस्तै, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, आफैंसँग सम्बन्ध, अरूसँगको सम्बन्ध, र बाँकी सृष्टिको सम्बन्ध।
भगवानलाई प्रेम गर्नुहोस्:
इसाईमतमा प्रेमको एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रेम हो। ईश्वरीय प्रेम र इसाई आस्थामा आस्थामा केन्द्रित हुन्छन्। यो बहु पवित्र शास्त्रहरूको प्रचलित अवधारणा हो, विशेष गरी पुरानो नियम र नयाँ नियम। पुरानो नियमले धेरै चोटि धनी शब्दावलीमा भगवान्को प्रेमको आवाज उठाएको छ। नयाँ करारले परमेश्वर मानवताप्रतिको प्रेमको बारेमा चर्चा गरेको छ र परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई अध्यात्म र विश्वासको केन्द्र बनाउँदछ।
जब हामी प्रभु र सर्वशक्तिमान् परमेश्वरलाई माया गर्ने कुरा गर्छौं, मसीही विश्वासका नेता, येशू ख्रीष्टले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नू भन्ने आज्ञा गर्नुभयो:
“तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, र आफ्ना सारा प्राणले, र आफ्ना सारा समझले प्रेम गर्नुपर्छ” (मत्ती २२::22)।
प्रत्येक विश्वास गर्ने र अभ्यास गर्ने ईसाईहरूका लागि, परमेश्वर आफूसँग भएका सबै चीजहरू र उनीहरूले भोग्नु पर्ने प्रत्येक अनुभवको लागि परम स्रोत हो। परमेश्वरले आफ्ना सबै सृष्टि, विशेष गरी मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले पुत्रको अन्तिम मुक्तिबाट लाभ उठायौं। परमेश्वरको महानताले उहाँको एकतामा पूर्ण विश्वास, उहाँको क्रोधको लागि डर, उहाँको योजनाहरूमा भरोसा र सबै चीजहरू र सृष्टिमाथि उहाँलाई प्रेम गर्न माग गर्दछ। त्रिएक एकमात्र सत्य ईश्वर हो जसलाई इसाईहरूले विश्वास गर्छन् र अन्य देवताहरूको मूर्ति बनाउन मनाही गरिएको छ।
“तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, र आफ्ना सारा प्राणले, र आफ्ना सारा समझले प्रेम गर्नू” (मत्ती २२::22)।
परमेश्वरलाई माया गर्ने अर्को पक्ष भनेको प्रभु, पिता र पवित्र आत्माको नामको दुरुपयोगबाट जोगिनु हो। भगवानलाई माया गर्ने धारणाले विश्वासीहरुलाई श्राप, शपथ खान, शैतानी कार्यहरु, झूट, र छलछाममा संलग्न हुनबाट रोक्छ। यदि एउटा विश्वासीले परमेश्वरलाई साँच्चै प्रेम गर्दछ र आफ्नो योजनाहरूमा भरोसा गर्दछ भने, उसले सबै समस्या, प्रशंसा, कृतज्ञता, र प्रार्थनामा उहाँको नाम पुकार्छ। परमेश्वरको नामले उहाँका गुणहरू, उहाँको सार र उहाँका आज्ञाहरूलाई स .्केत गर्दछ।
"प्रभुको डर बुद्धि को शुरुवात हो; सबै जसले उहाँको आदेश पालन गर्छन् एक राम्रो समझ छ। उहाँको अनन्त प्रशंसा हुन्छ, "भजन १११: १०।
परमेश्वरप्रतिको प्रेमको लागि निष्कपट प्रार्थना र तनमनको उपासना चाहिन्छ। इसाईहरूलाई हप्ताको सातौं दिनलाई शबाथ दिनको रूपमा पालन गर्ने आज्ञा दिइएको छ। सब्बथको शाब्दिक अर्थ हो विश्राम र आराधना। विश्वासीहरूले आरामको दिनमा मण्डलीमा सँगै प्रार्थना गर्नुपर्दछ र यसलाई पवित्र राख्नुपर्दछ र उपासनाको लागि तोकिनुपर्दछ। येशू ख्रीष्टको प्रचार र परमेश्वरको वचन पवित्र छ, र तिनीहरूलाई घृणा गर्नु सबैभन्दा ठूलो पाप हो।
स्टीव कार्बेट र ब्रायन फिक्कार्टले आफ्नो पुस्तक जब हेभलिंग हर्ट्स भन्ने पुस्तकमा आध्यात्मिक गरिबीलाई परमेश्वरको अख्तियार र अस्तित्व, भौतिकवादतर्फ झुकाव र मूर्तिपूजाको इन्कारको रूपमा उल्लेख गरे। मानिसजातिको पापी प्रकृति र त्रुटिपूर्ण आचरणहरू शैतान र त्यसका फौजहरूको कामले असर गर्छ, व्यक्तिगत स्तरमा अराजक ल्याउँछ।
हव्वा र आदमको सुरुको पापले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिगार्‍यो र शैतानलाई मानिसजातिमाथि विनाश ल्यायो। आध्यात्मिक गरिबी पतनको निश्चित परिणाम हो जुन परमेश्वरको वचनसँग मिल्नु आवश्यक छ।
“पुत्र परमेश्वरको महिमाको चमक र उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सही प्रतिनिधित्व हो, उहाँको शक्तिशाली वचनले सबै चीजलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उसले पापहरूको शुद्धिकरण गरिसकेपछि उहाँ स्वर्गमा प्रभुको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो, "हिब्रू १:।।
परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पहिलो आधारभूत सम्बन्ध हो जुन स्थिर गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरको कृपा प्राप्त गर्ने एउटा प्रभावकारी तरिका भनेको हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको काममा विश्वास गर्नु हो। त्यसोभए, येशू ख्रीष्टको शिक्षा फैलाउन सुसमाचारको सन्देश प्रचार गरेर परमेश्वरको प्रेमको घोषणा र प्रदर्शन गर्न। मेलमिलापका राजदूतहरूको रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी भनेको येशूले हामीलाई सुम्पनुभएको पवित्र काम पूरा गर्नु हो। ईभेलगलाइजिंग र मेलमिलाप कार्यहरू गर्नुपर्दछ जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई माथिको स्वर्गमा बोलाउनुहुन्न।
गलाती time: -4-। मा भनिएको छ, "तर जब ठिक समय पूर्णरूपमा आइपुगे, तब परमेश्वरले उनको पुत्रलाई पठाउनुभयो, जो एक महिलाको रुपमा जन्मेका थिए, जो व्यवस्थाको अधीनमा जन्मेका थिए, र व्यवस्थाको अधीनमा रहेकाहरूलाई छुटकारा दिन हामी छोरा-छोरीको रूपमा स्वीकार्न सकौं।"
हामी बसिरहेको समग्र समुदायले दुबै भौतिकवादी हिसाबले गरीब र भावनात्मक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्तिहरू समावेश गर्दछ। आत्मामा दरिद्र भएका मानिसहरूलाई गरिबीबाट उद्धारको आवश्यकता छ जुन चर्चको जिम्मेवारी हो। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यो हो कि हामी अक्सर परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई गलत अर्थ लगाउँछौं र गरीबीको अवधारणाको गलत अर्थ लगाउँदछौं। गरिब प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न दानको वस्तु बन्छ। गरिबहरूको सेवा र सहायता गर्ने आधारभूत उपाय भनेको उनीहरूलाई माया गर्नु, उनीहरूलाई समान मान्नु, र उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनु हो जुन हामी आफैले चाहन्छौं।
“तपाईंहरू बीच बसोबास गर्ने विदेशीलाई तपाईंको जन्मजात जन्मेको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई आफैलाई झैं प्रेम गर, किनकि तिमीहरू मिश्रमा परदेशी थियौ। म परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर हुँ, "लेवी १ :19: 34।
उनीहरूको मेलमिलापका राजदूतहरू सहितको चर्चले आध्यात्मिक दरिद्रहरूलाई बाइबलीय अवधारणाहरू सम्बन्धी शिक्षा दिन र धर्मशास्त्रको विवरण बुझ्न आवश्यक छ। चर्च सुविधाहरू सजीलो पहुँचयोग्य र गरिबहरूको लागि उपलब्ध गराउनुहोस्। प्रायः जसो चर्चका सुविधाहरूलाई कम उपयोग गरिएको छ, र यसलाई समुदायको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ। संकटको समयमा राहत प्रयासहरू सुधार गर्न वित्तीय स्रोतहरू प्रयोग गरेर गरीबहरूको सेवा गर्नुहोस्।
"जसले तपाईंलाई सोध्छ उहाँलाई दिनुहोस्, र जो तिमीबाट toण लिन चाहानुहुन्छ उहाँबाट टाढा नलैजानु भयो," मत्ती 5: 42.
आफैलाई माया गर
परमेश्वर प्रेमको प्रतीक हुनुहुन्छ, र उहाँ प्रेमको उत्तम मूर्त रूप हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सृष्टिलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुहुन्छ। उसले तपाईका त्रुटिहरू देख्दछ, उसले सबै गल्तीहरू जान्दछ, र तपाईंले उसलाई अस्वीकार गर्नुभयो भने पनि, उहाँको प्रेम कडा र बिना शर्त नै रहन्छ। उहाँको सृष्टिप्रति प्रेम र वफादारीको डिग्री मानवहरूको लागि अतुलनीय र अप्राकृतिक छ। यद्यपि, उहाँको प्रेममा विश्वास गर्नाले तपाईंलाई मूल्यवान् छ भनेर थाहा हुन्छ। भगवानले तपाइँलाई तपाइँका सबै त्रुटिहरू र शून्य अपवादहरूको साथ माया गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई माया र आदरको योग्य बनाउनुहुन्छ। उसले तपाईंलाई कहिल्यै हार माग्दैन, यदि तपाईंले उनलाई छोड्नुभयो भने पनि। प्रभुको नजरमा, प्रत्येक मानिस मूल्यवान् छ र प्रेमको योग्य छ। केवल विश्वास र परमेश्वरको प्रेम को शक्ति महसुस महसूस आत्म-प्रेम पैदा गर्छ। एकचोटि तपाईंले थाहा पाउनुभयो कि तपाईं आफ्नो प्रभुको सामु मूल्यवान् हुनुहुन्छ, तपाईंले आफूलाई को हो भनेर सम्मान गर्न र स्वीकार गर्न थाल्नुहुनेछ।
“तिमीले आफैंलाई प्रेम गर्नुपर्छ” (मत्ती २२: 22))
तपाईंसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण महत्त्वको छ। आत्म-घृणा र तपाईंको धेरै अस्तित्वलाई घृणा गर्दा भगवान जटिल र कम आत्मसम्मान बढ्छ।
“यिनीहरूले बोल्दछन्, र प्रोत्साहन दिन्छन् र सम्पूर्ण अधिकारका साथ हप्काउँछन्। कसैले तपाईंलाई तुच्छ नठानोस्, ”तीतस २:१:2।
तपाईंको गल्तीहरूको बाबजुद पनि, तपाईंको असीमित मूल्यलाई परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा स्वीकार गर्दा तपाईंलाई परमेश्वरसित नजिक र आत्मविश्वास हुन्छ। उच्च आत्मसम्मान र आत्मविश्वासले तपाईंलाई चर्चको साथ सेवा गर्न र पिता, पुत्र, र पवित्र आत्माको निम्ति काम गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंलाई वा तपाईंलाई अरू कसैले प्रेम गर्न सक्दैन भन्दा तपाईंलाई बढी प्रेम गर्दछ।
१ यूहन्ना::।: "प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ,"।
मानवजाति परमेश्वरको सृष्टि हो जुन उहाँको स्वरूपमा बनाइएको थियो र बिना शर्त प्रेम गरिएको थियो। आफूलाई घृणा गर्नु भनेको परमेश्वरको सृष्टिलाई तुच्छ ठान्नु बराबर हो। कम आत्म-सम्मान र परमेश्वरमा विश्वासको कमीको परिणामले कसैको मूल्य र मूल्यलाई शंका गर्ने बनाउँछ। मेलमिलापका राजदूतहरूको हैसियतमा येशूका अनुयायीहरूको आत्म-विश्वास र सम्मान पुनर्स्थापित गर्नु चर्चको जिम्मेवारी हो।
तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर
येशूले हामीलाई आफूलाई र अरूलाई प्रेम गर्न आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञाहरूको दोस्रो तालिकाले हामी वरपरका मानिसहरूलाई हामीले कसरी सम्मान र सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर देखाउँदछ। उनले हत्याको कार्यको स्पष्ट र कडा निन्दा गरे। परमेश्वरप्रतिको प्रेम र डरले मानवजातिलाई अन्य मानवलाई हानि पुर्‍याउन वा हाम्रो शरीरलाई छिमेकीलाई चोट पुर्‍याउन निषेध गर्दछ। आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने र छिमेकीहरूलाई तिनीहरूको शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गर्नेलाई परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ।
घर, सरकार र चर्चमा अख्तियारवालाहरूलाई घृणा गर्नु र तिनीहरूको अनादर गर्नु भनेको परमेश्वरका आज्ञाहरूको सीधा अनाज्ञाकारिता हो। येशूका साँचो इसाई र सख्त अनुयायीहरूले आफ्ना आमाबुबासँगै सुरु हुने अख्तियारको सम्मान र सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईंको आमा बुबाको सेवा गर्नु र माया गर्नु भनेको एउटा कार्य हो जुन त्रिकोणले धेरै मन पराउँदछ। यस पूर्वानुमानमा अन्य अधिकारीहरू पनि समावेश छन् जस्तै अभिभावकहरू स्कूल, कार्यस्थलहरू, र चर्चहरूमा।
“त्यसकारण, जसले अख्तियारवालाहरूको प्रतिरोध गर्छ उसले परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएबमोजिम विरोध गर्छ र जसले विरोध गर्छ उसले सजाय भोग्नेछ,” रोमी १ 13: २।
एक साँचो इसाईले पारिवारिक जीवन र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई भगवानबाट पाएको आशिषको रूपमा मान्दछ र पुरुष र महिलाको बिचमा विवाहको स्थिरतालाई उच्च मान्दछ। विवाह एक पवित्र बन्धन हो र यसको साक्षीको रूपमा परमेश्वर आफैंले गठन गर्नुभएको हो। यो एक वरदान हो जुन आपसी सम्झौताको माध्यमबाट पवित्र र शुद्ध बनेको छ, यसलाई विशेष ईश्वर-प्रदान गरिएको बन्धन बनाउँदै।
“यसकारण, एकजना मानिसले आफ्नो आमा-बाबुलाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिल्छ र ती दुई एक हुन्छन्। त्यसो भए, तिनीहरू अब दुई होइन, तर एउटै शरीर हुन्छन्, ”मर्कूस १०: --10।
यस पवित्र बन्धनको बिच्छेद भनेको येशूको शिक्षा र सुसमाचारको प्रचारको स्पष्ट उल्लंघन हो। इसाई धर्मले यौन शुद्ध र सभ्य जीवनको प्रचार गर्दछ जहाँ पतिपत्नीले एक अर्काको सम्मान गर्दछन् र मृत्युको बिषयमा अलग राख्छन्।
मर्कूस १०: “अनुसार," त्यसोभए, के परमेश्वर सँगसँगै जानुभएको छ, कसैले नछुट्टयाओस्। "
इसाई विश्वासमा, यौन सम्बन्ध विवाह पछि मात्र स्वीकार्य छ। दस आज्ञाले यौन गतिविधिमा संलग्न हुनु र विवाह अघि कार्य गर्न निषेध गर्दछ। यसमा व्यभिचारको अवधारणा समावेश छ। व्यभिचार यौन वफादारीसँग सम्बन्धित छ जब तपाईं विवाहमा हुनुहुन्छ। पारिवारिक जीवन र स्थिर वैवाहिक जीवनले परमेश्वरबाट आशिष्‌हरू पाउँदछ र यस्ता कार्यहरूले वैवाहिक र पारिवारिक जीवन दुवैमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउँछ।
अभिभावक, बच्चाहरू, र पति / पत्नी परिवार जीवनको मूल हो। यद्यपि हाम्रो जीवन केवल पारिवारिक अन्तर्क्रियामा मात्र सीमित छैन। हाम्रा वरिपरिका मानिस र हामी दैनिक कुराकानी गर्ने मानिसहरूलाई हाम्रो छिमेकी भनेर चिनिन्छ। इसाईमतको भाषामा सबै मानिस र विश्वासीहरूलाई छिमेकी भनेर चिनिन्छ। भगवान्ले हामीलाई बिरामी, निन्दा गर्ने, धोका दिने, बदनाम गर्ने र हाम्रा छिमेकीहरू विरूद्ध झूटा गवाही दिन रोक्नुहुन्छ। येशूले हामीलाई सुसमाचारको माध्यमबाट हाम्रा छिमेकीहरूको आदर गर्न, उनीहरूको रक्षा गर्न र उनीहरूसँग दयालु कुरा गर्न सिकाउनुहुन्छ।
“तिमीले आफ्‍नो प्रजाको छोराको विरुद्धमा बदला लिनु हुँदैन र आफ्‍नो छिमेकीलाई आफैंलाई झैँ प्रेम गर्नू। म परमप्रभु हुँ,” लेवी १ :19: १।।
परमेश्वरले हामीलाई छिमेकीलाई सुम्पनुभएको अर्को जिम्मेवारी भनेको अरूको सम्पत्तिको लालच गर्नु हो। लोभ गर्नु र छिमेकीहरूको पासोमा परेको चीज स्वामित्वको चाहना पापी कार्य हो जुन भगवान र मानवजातिले हेरेका छन्। नवौं र दशौं आज्ञाले पापलाई लोभ्याउने कुरा गरेको छ र छिमेकीहरूको बिरूद्ध षडयन्त्र गर्नबाट रोक्छ जुन सही कुराको लागि हो।
“धिक्कार ती मानिसहरू जसले खराब योजनाहरू बनाउँदछन् ... तिनीहरूले खेतहरू लालच गर्छन् र तिनीहरूको घरहरू लिन्छन् र कब्जा गर्छन्। तिनीहरूले उसको घरका एक मानिसलाई धोका दिए, उसको सम्पत्तीको साथी हो। ”मीका २: १-२।
येशूका भक्तहरू र अनुयायीहरू दयालुता र नम्रता प्रदर्शन गरेर मानवताको सेवा गर्न बाँचिरहेका छन् जुन परमेश्वरको सन्देशको जग थियो।
"र दोस्रो यो हो: 'आफ्ना छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नुहोस्," मत्ती २२: 22।।
हाम्रो वरपरका मानिसहरुसंगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउदै अन्यहरु संग सम्बन्धको कोष समाप्त गर्दछ। तपाईका छिमेकीहरूका लागि प्रदान गर्ने, उनीहरूको शोषण बिनाको आवश्यकताहरूको हेरचाह गर्नु, र सम्भावित तरिकामा आफ्ना छिमेकीहरूको सेवा गर्नु भनेको चर्च र विश्वासीहरूले कसरी एउटा उत्तम र ख्रिष्ट-उन्मुख समुदाय बनाउन सहयोग गर्दछन्।
सृष्टिको बाँकी प्रेम
परमेश्वरको सन्देशका सन्देशवाहकहरू र शुभ समाचार ल्याउनेहरूको रूपमा, सबै विश्वासीहरू परमेश्वरको सृष्टिलाई हेरचाह गर्न जिम्मेवार छन्। मानव जातिलाई धर्मशास्त्रले आशिष दिएको छ जसले उनीहरूलाई प्रेम गर्दछ र ईश्वरीय सृष्टिको हेरचाह गर्न प्रेरित गर्दछ। प्राकृतिक संसारको देखभाल र हेरचाहमा जोड दिईएको बलियो र धनी छ।
“परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो,“ फल्दै-फुल्दै, वृद्धि हुँदै जाओ। पृथ्वी भर्नुहोस् र यसलाई वशमा पार्नुहोस्। समुद्रमा माछा, आकाशमा चराहरू र पृथ्वीमा सर्ने सबै जीवित प्राणीहरूमाथि शासन गर्नुहोस्, ”उत्पत्ति १:२:1।
इसाईहरूले संसारको काउन्टर-सांस्कृतिक, विशिष्ट र बाइबलीय दृष्टिकोणको पालना गर्नुपर्दछ जसले उनीहरूलाई अन्य सृष्टिहरू प्रति ख्रीष्टको शिक्षा अनुसार व्यवहार गर्न मद्दत गर्दछ। सृष्टिको बाँकी भागको लागि, हामीलाई दिइएको मानवता प्रभुको भूमिका पूरा गर्ने बारेमा बढी हो। सृष्टिलाई हेरचाह गर्ने कार्यले परमेश्वरले पहिलो-पहिले मानिस, आदम र हव्वालाई देखाउनुभएको प्रेम र हेरचाह झल्काउँछ।
उत्पत्ति २:१:2 "" प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र अदनको बगैंचामा यो काम गर्न र हेरचाह गर्न राख्नुभयो, "उत्पत्ति २:१:15।
मूल पापको प्रभाव यति थियो कि यसले बाँकी सृष्टिसित मानवजातिको सम्बन्धलाई खलबल्यायो। भण्डारेपनको गरीबी व्याप्त थियो, उद्देश्यको भावनालाई धमिल्याउने र श्रापलाई अझ सुदृढ पार्दै। भण्डारेपन शब्द भनेको सर्वशक्तिमान प्रभुले बनाएको संसारको हेरचाह गर्नु हो। सारा मानव जगतका भण्डारे र हेरचाहकर्ताका रूपमा मानवतालाई नियुक्त गर्नुभयो। प्रकृतिको सद्भाव कायम राख्न र हेरचाह गर्नु मानवजातिको दायित्व हो। यद्यपि, प्रभुको क्रोधले श्राप ल्यायो, मानिसजातिलाई सृष्टिप्रति आफ्नो कर्तव्यहरूदेखि बेवास्ता गर्यो। सुस्ती, भौतिकवाद र उद्देश्यको भावना गुमाउनु नै अन्तिम परिणाम हो।
“उनले त्यस स्त्रीलाई भने,“ म पीडाले गर्दा तिमीलाई धेरै कष्ट दिइरहेछु। कष्टदायी श्रमको साथ, तपाईं बच्चाहरूलाई जन्म दिनुहुनेछ… “श्रापित हो जमीन कारणले तपाईंको कारणले; कष्टदायी परिश्रमको मार्फत, तपाईले आफ्नो जीवनको सबै दिनहरू त्यसबाट खानेकुरा खानु हुनेछ, " उत्पत्ति:: १-3-१-16.
सबै प्राणीहरूले महत्त्वपूर्ण मूल्य राख्छन् र प्रभुलाई प्रिय छन्। सृष्टि र ग्रहको हेरचाह मानवजातिको ख्याल राख्नु जस्तै हो। इभान्जेलिकल नेटवर्कहरू मार्फत सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने, पुनर्स्थापना प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने, चेला र चेला बनाउने, छोटो अवधिका मिसन टोलीहरू पठाउने, र वातावरण-बचाउने कार्यक्रमहरूमा भाग लिने सहित ठोस कार्यहरू लगाउनुहोस्। पृथ्वी र आमा प्रकृतिप्रति जिम्मेवार इसाई हुनुले परमेश्वरप्रतिको प्रेम झल्काउँछ।
निस्सन्देह, मूल पाप र पतनले मानिसजातिलाई नोक्सान पुर्‍यायो जसले मानवजाति, परमेश्वर र ईश्वरको सृष्टिको बीचको सम्बन्धको जगलाई बिगार्‍यो। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, र आर्थिक प्रणालीको टुक्रि्ग पतनको परिणाम हो। प्रभावहरूको गम्भीरता केवल चारैवटा सम्बन्धहरू तय गरेर मात्र कम गर्न सकिन्छ।
चर्च सांप्रदायिक समाचार हाम्रो विश्वको विकास गर्दै होलोवाद समग्र समुदाय विकास गरीबी उन्मूलन जब हर्स्ट मद्दत गर्दै गरीब गरीब काम गर्दैछ
हाम्रो संसारको विकासको संस्थापक र कार्यकारी निर्देशक हो, एक संस्था जसले समग्र समुदाय विकासलाई कार्यमा लान खोज्छ। उसले येशूलाई प्रेम गर्छ! र, उहाँ एक पति, एक बुबा, लुथरन पास्टर, एक मिसनरी, एक लेखक, flamenguista (एक समर्थक हो Clube de Regatas do Flamengo फुटबल टोली), र ब्राजिलियन जिउ-जित्सू व्यवसायी।